Mallard cagaaran iyo liin koronto, labada midab ee cusub ee Smart Folio iyo Smart Cover | Wararka IPhone
Mallard cagaaran iyo liin koronto, labada midab ee cusub ee Smart Folio iyo Smart Cover
Angel Gonzalez | 21/04/2021 15:00 | iPad, Noticias
Bandhigyada Apple ma aha oo kaliya boos u leh alaabada cusub iyo nidaamyada cusub ee hawlgalka. Waxay sidoo kale waqti ku qaataan isugeynta midabada cusub, qalabka cusub, iyo qaabab cusub oo laysku dayo in la helo adeegsadayaasha horey uheystay qalab si ay xitaa maalgashi ugu sii sameystaan. Apple waxay leedahay kiisas badan oo kiisaska dhammaan qalabkeeda. Gaar ahaan, daboolka Smart Folio y Cover Smart for iPad, waxaa jira laba soojiidasho aasaasi ah si loo ilaaliyo kiniinka tufaaxa weyn. Kadib soo bandhigiddii shalay, Laba midab oo cusub ayaa lagu daray si loo soo dhoweeyo guga: Orange Electric iyo Mallard Green.
IPad Smart Folio iyo Smart Cover waxay helayaan laba midab oo cusub
Kiiska Apple Smart Folio wuxuu ka ilaaliyaa qalabka hore iyo gadaal, halka Smart Cover uu kaliya ka ilaaliyo iPad-ka dhanka hore. Kiiskan ugu dambeeyay wuxuu asal ahaan ka yimid iPad 2, kaas oo soo saaray magnets calaamadeeyay hor iyo kadib qalab ka ilaaliya Apple iPads. Dhammaan ipadyadu waxay leeyihiin nooc Smart Smart folio iyo Smart Cover ah oo sidaas ah midabada cusub ee aan maanta ka hadlayno waxay gaarayaan dhammaan moodooyinka hadda jira.
Kuwani waa laba midab oo cusub oo Apple u yeedhay liin koronto iyo mallard cagaaran. Laba midab oo kala duwan kuwa aan caadeysanay ee Apple-ka weyn ee noo ogolaanaya inaan siino guga aaladaha aan ku shaqeyno.
Qiimaha kiisaskani way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay iPad-ka iyo cabirkiisa. Tusaale ahaan, Smart Cover-ka jiilka 8-aad ee iPad-ka ayaa qiimihiisu yahay 55 euro, halka isla kiiska iPad mini-kiisu yahay 45 euro. Dhinaca kale, Smart Folio loogu talagalay 12,9-inch iPad Pro wuxuu u dhigmaa 109 euro, halka isla kiiska 11-inch iPad Pro uu yahay 89 euro. Waxaad ka hubin kartaa qiimaha iyo waxqabadka ka jira Bogga rasmiga ah ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Mallard cagaaran iyo liin koronto, labada midab ee cusub ee Smart Folio iyo Smart Cover
Soodejiso midabka cusub ee midabkiisu yahay iPhone 12
Apple wuxuu xaddidayaa qaar ka mid ah emojisyada iyo ereyada ku xardhan xayeysiinta shakhsi ahaaneed ee AirTag